Ozi kuki - Laptọọpụ dị ọnụ ala
Ozi gbasara kuki
1 Kedu ihe kuki?
2 Kedu ihe bụ kuki?
3 Kedu ozi kuki na-echekwa?
4 Kedu ụdị kuki n'ebe ahụ?
5 Kedu ihe nwere kuki nke atọ na nke atọ?
6 Kedu ihe ga - eme ma m kwụsị kuki?
7 Nwere ike ihichapụ kuki?
8 Ntọala kuki maka ihe nchọgharị ndị kachasị ewu ewu
una kuki ọ bụ faịlụ ederede Enweghi ike nke ahụ na-echekwa na ihe nchọgharị gị mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Uru nke kuki bụ na web nwere ike icheta ọbịbịa gị mgbe ịlaghachi na-agagharị na ibe ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị amaghị ya, kuki Ha ejirila ya rụọ ọrụ ruo afọ iri abụọ, mgbe ihe nchọgharị mbụ nke World Wide Web pụtara.
Kedu ihe bụ kuki?
Ọ bụghị nje, ọ bụghị Trojan, ọ bụghị ikpuru, ọ bụghị spam, ọ bụghị spyware, ọ naghị emepe windo mmapụta.
Kedu ozi a kuki?
na kuki ha anaghị echekwa ozi dị nro banyere gị, dị ka kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nkọwa ụlọ akụ, foto, NJ gị ma ọ bụ ozi nkeonwe gị, wdg. Ihe data ha debere bụ nke teknuzu, mmasị onwe onye, ​​ịhazi ọdịnaya, wdg.
Sava weebụ anaghị ejikọta gị dị ka mmadụ mana yana ihe nchọgharị weebụ gị. N’ezie, ọ bụrụ na ị na-eji Internet Firefox ma ọ bụ Chrome na-agagharị mgbe niile n’ Internetntanet, ị ga-ahụ na ebe nrụọrụ weebụ anaghị achọpụta na ị bụ otu onye n’ihi na ọ na-akpakọrịta na ihe nchọgharị ahụ, ọ bụghị onye ahụ.
Kedu ụdị kuki odi?
CookiesNka na ụzụ: Ha bụ ihe kachasị ma nye ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, ịmara mgbe mmadụ ma ọ bụ ngwa akpaaka na-eme nchọgharị, mgbe onye ọrụ na-enweghị aha yana onye edebanyere aha na-eme nchọgharị, ọrụ ndị bụ isi maka arụmọrụ nke weebụsaịtị ọ bụla dị ike.
CookiesNyocha: Ha na-anakọta ozi gbasara ụdị ịgagharị ị na-eme, ngalaba ị na-ejikarị, ngwaahịa ndị a na-enyocha, oge ojiji, asụsụ, wdg.
CookiesMgbasa ozi: Ha na-egosi mgbasa ozi dabere na nchọgharị gị, obodo gị, asụsụ, wdg.
Kedu ihe bụ kuki nwee nke nke ndị ọzọ?
na nwere kuki bụ ndị ibe ndị ị na-eleta na site n'aka ndị ọzọ bụ ndị ọrụ mpụga ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ dị ka Facebook, Twitter, Google, wdg.
Ihe na - eme ma ọ bụrụ na m gbanyụọ ya kuki?
N'ihi ya, na ị na-aghọta akporo na deactivating na kuki M na-egosi gị ụfọdụ ihe atụ:
Gaghị enwe ike ịkekọrịta ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ahụ na Facebook, Twitter ma ọ bụ netwọkụ ọ bụla ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ agaghị enwe ike ịmegharị ọdịnaya ahụ na mmasị gị, dị ka ọ na-abụkarị na ụlọ ahịa n'ịntanetị.
Will gaghị enwe ike ịnweta mpaghara nke weebụsaịtị ahụ, dị ka akaụntụ mma ọ bụ Ihe omuma moIwu m.
Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị: Ọ gaghị ekwe gị omume ịzụrụ ihe n'ịntanetị, ha ga-abụrịrị site na ekwentị ma ọ bụ site na ịga na ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwere otu.
Ọ gaghị ekwe omume ịhazi mmasị ala gị dịka mpaghara oge, ego ma ọ bụ asụsụ.
Ebe nrụọrụ weebụ agaghị enwe ike ịme nchịkọta weebụ na ndị ọbịa na okporo ụzọ na weebụ, nke ga-eme ka o siere weebụ ike ịsọ mpi.
Gaghị enwe ike ide na blọọgụ ahụ, ị ​​gaghị enwe ike bulite foto, biputere ihe, ọnụego ma ọ bụ ọnụego ọdịnaya. Weebụ agaghị enwe ike ịma ma ị bụ mmadụ ma ọ bụ ngwa akpaaka na-ebipụta spam.
Ọ gaghị enwe ike igosi mgbasa ozi nkewa, nke ga-ebelata ego mgbasa ozi nke weebụ.
A na-eji netwọk mmekọrịta niile kukiỌ bụrụ na ịgbachaa ha, ịgaghị enwe ike iji netwọkụ ọ bụla rụọ ọrụ.
You nwere ike wepu kuki?
Ee, Ọ bụghị naanị ihichapụ, kamakwa igbochi, n'ụzọ izugbe ma ọ bụ otu ụzọ maka otu ngalaba.
Iwepu kuki nke weebụsaịtị ị ga-aga nhazi nke ihe nchọgharị gị na ebe ị nwere ike ịchọ ndị metụtara ngalaba ahụ ajụjụ ma gaa n'ihu na mkpochapụ ya.
Nhazi nke kuki maka ihe nchọgharị kachasị ewu ewu
Nke a bụ otu esi enweta a kuki nchọgharị kpebisiri ike Chrome. Mara: usoro ndị a nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ:
Gaa na Ntọala ma ọ bụ Mmasị site na Njikwa faili ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi ahaziri iche nke dị n'elu aka nri.
Ga-ahụ ngalaba dị iche iche, pịa nhọrọ Gosi nhọrọ di elu.
Gaa na Nzuzo, Ntọala ọdịnaya.
Họrọ Kuki niile na data saịtị.
A ndepụta ga-egosi na niile kukiota site na ngalaba. Iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịchọta kuki nke ụfọdụ na ngalaba tinye ikpe ma ọ bụ kpam kpam adreesị na ubi Chọọ kuki.
Mgbe ịmechara nza a, otu ma ọ bụ karịa ahịrị ga-egosi na ihuenyo na kukinke web na-arịọ. Ugbu a ị ga - ahọrọ ya wee pịa X ịga n'ihu na mkpochapụ ya.
Iji nweta nhazi nke kuki ihe nchọgharị internet Explorer soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Gaa na Ngwaọrụ, Nhọrọ Ịntanetị
Pịa na Nzuzo.
Bugharịa ihe mmịfe ahụ iji dozie ogo nzuzo ịchọrọ.
Iji nweta nhazi nke kuki ihe nchọgharị Firefox soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Gaa na nhọrọo preferences dabere na sistemụ arụmọrụ gị.
En Akụkọhọrọ Jiri ntọala ntọala maka akụkọ ihe mere eme.
Ugbu a, ị ga-ahụ nhọrọ ahụ Nabata kuki, ị nwere ike ịgbalite ma ọ bụ kwụsị ha dị ka mmasị gị si dị.
Iji nweta nhazi nke kuki ihe nchọgharị Safari maka OSX soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Gaa na preferencesmgbe ahụ Nzuzo.
N'ebe a, ị ga-ahụ nhọrọ ahụ Block kukiịtọ ụdị mkpọchi ịchọrọ ịrụ.
Iji nweta nhazi nke kuki ihe nchọgharị Safari maka iOS soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Gaa na Ntọalamgbe ahụ safari.
Gaa na Nzuzo & Nche, ị ga-ahụ nhọrọ Block kukiịtọ ụdị mkpọchi ịchọrọ ịrụ.
Iji nweta nhazi nke kuki nchọgharị maka ngwaọrụ android soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Gbaa ihe nchọgharị ahụ wee pịa igodo ahụ menumgbe ahụ Ntọala.
Gaa na Nche na Nzuzo, ị ga-ahụ nhọrọ Nabata kukiiji mee ma ọ bụ gbanyụọ igbe ahụ.
Iji nweta nhazi nke kuki nchọgharị maka ngwaọrụ Windows Phone soro usoro ndị a (ha nwere ike ịdị iche dabere na ụdị ihe nchọgharị ahụ):
Mepee internet Explorermgbe ahụ ọzọmgbe ahụ Nhazi
Ugbu a ị nwere ike ịgbalite ma ọ bụ kwụsị ọrụ igbe ahụ Kwe ka kuki.